Etu esi amata ma nwata emebi emebi | Bezzia
Etu esi amata ma nwata emebie
Maria Jose Roldan | 12/03/2021 22:00 | Na-akụziri ụmụaka ihe
Ọ dịghị nne ma ọ bụ nna ọ bụla na-enwe mmasị ikweta na nwa ya emebiwo ma ghara ịgụ akwụkwọ. Agbanyeghị, ụdịrị ụdị omume a bụ ihe a na-ahụkarị karịa ka ị chere na ọ bụ maka ụbọchị.
Ya mere, ọ dị mkpa ịnwe ike idozi nsogbu a n'oge ma ọ bụrụ na ọ bụghị na enwere ike imerụ ha ahụ ma a bịa n'ịghọ okenye. Ndị nne na nna ga-enwerịrị ihe ndị dị mkpa iji nwee ike imezi ụdị omume ọjọọ a maka ụmụaka ma gbochie ụmụ ha imebi emebi.
1 Etu esi amata ma nwata emebie
2 Otu esi edozi agwa nke nwata emebiwo
E nwere ọtụtụ ihe ịrịba ama na-egosi na nwatakịrị emebiwo nakwa na omume ya ezighi ezi:
Nwa ahụ na-ewe iwe banyere ihe niile ma na-ewe iwe dị nkịtị ruo afọ 3 ma ọ bụ 4. Ọ bụrụ na mgbe afọ ahụ gasịrị, nwatakịrị ahụ na-anọgide na-ewe iwe, ọ nwere ike igosi na ọ bụ nwatakịrị emebiwo. N’oge dị otu a, a na-eji iwe na iwe iji duhie ndị nne na nna wee nweta ihe ha chọrọ.
Nwatakịrị na-emebi emebi adịghị eji ihe o nwere akpọrọ ihe ma na-achọrọ ihe mgbe niile. Onweghi ihe na emezu ma ọ bụ na-emeju ya afọ ọ nweghị ike ịza mba maka azịza ya.
Enweghị agụmakwụkwọ na ụkpụrụ bụ ihe ọzọ na-egosi na nwata emebiala. Ọ na-agwa ndị ọzọ okwu n'ụzọ enweghị nkwanye ùgwù na nlelị kpam kpam.
Ọ bụrụ na nwatakịrị emebi emebi, ọ bụ ihe dị njọ na ya nupụ isi n'iwu ọ bụla nke ndị mụrụ ya. Ọ naghị enwe ike ịnabata iwu e guzobere n ’ụlọ ma na-eme ihe masịrị ya.
Otu esi edozi agwa nke nwata emebiwo
Ihe mbu ndi nne na nna kwesiri ime bu inabata na nwa ha emebiwo nakwa mmuta nke a mutara ezughi oke. Si ebe a dị mkpa idozi omume dị otú ahụ ma soro usoro ntuziaka ndị na-enyere nwata ahụ aka inwe omume kwesịrị ekwesị:
Ọ dị mkpa iguzosi ike na ihu nke iwu akwadoro ma ghara inye nwata ahụ ohere.
Onye ntà aghaghi inwe otutu oru ndi aghaghi imezu. Ndị nne na nna ahụ enweghị ike inyere ya aka, oberekwa ji onye ahụ ụgwọ iji mezuo ha.
Dialogue na ezi nkwurịta okwu bụ isi ihe na-egosi ịkwanyere ndị okenye ùgwù. Nsogbu nke umuaka taa nwere bu na ha adighi-agwa ndi muru ha okwu, na-akpata omume na-ekwesịghị ekwesị.
Ndi nne na nna kwesiri ibu ihe nlere-anya nye umu ha ma nwee omume kwesịrị ekwesị n’ihu ha.
Ọ dị mma ikele nwata mgbe ọ na-eme ihe ziri ezi, na ọ dịkwa mma. Kwalite omume ndị dị otú ahụ ga-enyere nwata ahụ aka ịkwanyere ụkpụrụ dị iche iche nke ndị nne na nna guzobere ùgwù.
Na nkenke, Kụziri nwatakịrị abụghị ọrụ dị mfe ma ọ bụ dị mfe ma chọọ oge na nnukwu ndidi. Na mbụ ọ nwere ike isiri nwata ahụ ike ịghọta iwu ndị dị otu a mana ọ ga-emesia mụta ọtụtụ ụkpụrụ ga-enyere ya aka ime ka omume ya bụrụ nke kacha mma na nke kwesịrị ekwesị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Ndị nne » Na-akụziri ụmụaka ihe » Etu esi amata ma nwata emebie
Akwụkwọ 5 maka ibi ndụ na ị ga-agụ
Ihe oriri ndị a na-emetụta mgbasa ọbara gị